के तपाईंको अपर लिपमा जुँगा आएको छ ? घरेलु उपायबाट सजिलै हटाउन सकिन्छ – दैनिक नेपाल न्युज
के तपाईंको अपर लिपमा जुँगा आएको छ ? घरेलु उपायबाट सजिलै हटाउन सकिन्छ
काठमाडौ- अपर लिपमा कपाल आउनु भनेको पुरुषका लागि स्वभाविक कुरा नै हो तर अपर लिपमा कपाल आएर धेरै महिलाहरु वाक्क पर्नु भएको छ । अपर लिपमा कपाल आउनु महिलाहरुको आम समस्या हो । अपर लिपमा कपाल आएर महिलाहरुको सुन्दरतामा हानि पुर्यायको छ ।
यो एउता समस्या बनेको छ । अपर लिपको कपाल हटाउन थोरै पिडा त हुन्छ तर यसलाई हटाउन निकै जरुरी छ। धेरै महिलाहरुलाई लिपको कपाल कसरि हटाउने भन्ने चासो को विषय बनेको छ । यसलाइ हटाउन विभिन्न किसिमका घरेलु उपाए अपनाउनु पर्दछ ।
दुइ वटा कागती निचडेर यसमा थोरै चिनी मिलाउने यसलाई केहि बेर सम्म घोल्ने र पातलो गराए पछि पेस्‍टलाई ओठको माथिल्लो भागमा लगाउने यसलाई १५ मिनेट राखेर सफा पानीले धुने अपर लिपको कपाल हटाउनको लागि अन्डाको सेतो भाग पनि राम्रो उपाय हो।
यस पेस्ट बनाउनको लागि एउटा अण्डाको सेतो भागमा एक चम्चा आटा र चीनीलाई मिसाउने फेरी यस पेस्टलाई आफ्नो ओठभन्दा माथिल्लो भागमा लगाउने यसलाइ तिस मिनेट सम्म राख्ने त्यसपछि ओठको माथिल्लो भागमा लगाउने नियमित यि विधि अपनाउदा अपर लिप हेयर हटेर जान्छ ।
ग्यास्ट्रिकमात्र नभई महिनावारी गडबडीका लागि अचुक औषधि हो जाइफल, यस्ता छन् अन्य फाइदा